Ambohidratrimo : Maty voatifitra ny saofera - Lasa ny vola 100 tapitrisa
Nitrangana fanakanana sy fanafihana fiara indray teo amin’ny fiolahana fidirana ny tanànan’Ambohidratrimo, ny sabotsy tamin’ny 10 ora alina.
Fiara marika « Peugeot 206 » avy eny Mandroseza, handeha hihazo an’i Maevatanana no niharan’io sakan-dalana io.
« Avy hatrany dia ntifirin’ireo mpanalan-dalana ny mpamilin’ilay fiara ka maty teo noho eo. Voatifitra toy izany koa ny lehilahy iray teo akaikiny fa mba tany amin’ny fitombenany ka afaka nandositra ihany », hoy ny tatitra avy amin’ny zandarimaria.
Nailik’ireo mpanakan-dalana, izay teo amin’ny efatra na dimy lahy, teo amoron-dalana ny fatin’iay mpamily ary nentin’izy ireo nandositra ny fiara. Rehefa lasa 400 metatra teo anefa izy ireo dia nahatsikaritra fa mbola nisy vehivavy iray tao amin’ny seza arian’ilay fiara, araka ny tatitra hatrany.
« Norahonany hanome ny vola ity ramatoa ity raha tsy te ho faty ka nanome tokoa. Vola mitentina Ar 100 tapitrisa voalaza fa saika handeha hividianana volamena tany Maevatanana no lasan’izy ireo mpanafika », hoy ny loharanom-baovao.
Vao azony ny vola dia noroahin’ireo olon-dratsy nidina ilay ramatoa. Ny fiara sy ny vola no lasan’izy ireo. Niverina nandeha an-tongotra teny amin’ny sampanan-dalana nitifirana ilay mpamily ilay ramatoa ary efa fatin’ilay mpamily sy ilay naratra voatifitra niaraka taminy no hitany teo an-tsisin-dalana.
Hita teny amin’ny « bout de piste » eny Ivato ilay fiara « Peugeot 206 » taoriana kelin’izay, nihosin-drà. Nalefa eny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona ny razana, natao fanadihadiana.